Alshabaab oo Soo Bandhigay nin isku Qarxiyeey Saldhigii Bariire – Radio Daljir
Alshabaab oo Soo Bandhigay nin isku Qarxiyeey Saldhigii Bariire
Oktoobar 2, 2017 7:09 b 0
Al-shabaab ayaa shaacisay magaca Qofka fuliyay weerarkii ugu horreeyay ee Jimcihii lagu qaaday Saldhi Ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degaanka Bariirre ee Gobolka Shabeellaha hoose.
dhinaca kale Al-shabaab ayaa sheegtay in Ibraahim Cabdullahi Macallimow oo ka soo jeeda Beesha Gaaljecel uu fuliyay weerarkii ka dhacay bariirre Jimcihii la soo dhaafay.
Macallimow oo weerarka inta uusan geysan ka hor cod laga duubay ay siideysay Idaacadda Afka Al-shabaab ku hadasha ee Andalus ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay qorshahiisa ismiidaaminta ah.
Weerarka Jimcihii ka dhacay bariirre waxaa ku geeriyooday dad ka badan 20 Qof oo u badnaa dhinacyada halkaas ku dagaallamay iyada oo Al-shabaab ay sheegeen in ay 23 Askari oo ka mid ah Ciidamada dowladda ku dileen weerarkaas.
Xubintii Ciyaaraha: Natiijooyinka Premiere League (dhegayso)